भेडीकम्बलको प्वाल - Dainik Online Dainik Online
नौलेको बनमाली छँदै थिई । मुले र लालसरी पनि पहिलेदेखिकै जोडी थिए । जोखे र बिनमति, गोडल्फे र हिकासरी पूर्वजोडीहरु भए पनि हिकासरीले जोखेलाई ‘रे’ मानेर खेल्ने भनेपछि बिनमति ठुस्किएकी थिई । उसले गोडल्फेलाई रे (श्रीमान) मान्न तयार भइनी । भनी, “इ, नो मोढे स कटाका ओली रीज्याउ… ।”
समूहमा सबभन्दा पातली बिनमति नै थिई । त्यही भएर लिखुरी भनेपछि उसको कन्सिरी तातिन्थ्यो । फतफताउन थाल्थिन्– “नङ् गोडल्फे, मोढे, घुढुलु, नङै मालेव हर्पे, अङ्गार… ।”
सन्तुले उनीहरुको विवाद समाधान गरिदियो । “जो स मिलीडे मनि टाय… सोजोका सा नि बे”– सन्तुले दुबैलाई सम्झाए बुझाएपछि अन्तमा यही भनाईमा सहमत भए । जोडी जो जसको भए पनि यो त बलबलाको खेल मात्र हो भन्ने कुरा हिकासरीले सबभन्दा पहिले बुझेर जोखेलाई स्वीकारी । भनी– “हो टा किनी मैदाने य ओज्या ङा टा है ।”
गोडल्फे र बिनमतिको हालत भने केही फरक थियो । निरीह जस्तै बेजोडी बनेकी म सबको क्रियाकलाप नियालीरहेकी हुन्थेँ । आफूमाथि चढ्न आएको गोडल्फेलाई बिनमतिले लात्ताले बाहिर हु¥र्याइदिई । सँगसँगै उनीहरुको घर पनि भत्कियो । आक्रोशित थिई बिनमति– “इटा व मोढेलाइ मनि टर्ट….।”
लामो समयको अन्तरालपछि हिजो घाँस काट्न सन्ध्याकालीन समयमा त्यहाँ पुगेकी थिएँ । उस्तै थियो खर्कडाँडा, मात्र मेरा बालसखीहरु थिएनन् । र, त्यो उमेर थिएन मसँग । टोलाईरहैँ, गमिरहेँ– उही खर्कडाँडाको उतिस रुखमुनि बसेर । यस्तो लाग्थ्यो, उहिले वस्ती बसालेका बाँजो गराहरुले पिरतीको वस्ती बसाल्न आह्वान गरिरहेथे । छेउँको झाडीले पनि ‘माया मा¥यौ कि’ भनिरहेझैँ लाग्यो । अलि परको मन्जुवा खोला बालक्रिडाबिहीन रोइरहेझैँ लाग्यो । “एक दिन तिमीसितै बिहे गर्छु… ।”– सन्तुको आवाज गुञ्जियो कानमा । आँशुले आँखा धुमिल भयो विगत सम्झेर ।
“टाने के आव जुनी ल याज माङ्क, छुटो जुनी मनि…. ।”– उसले अर्को जुनीमा पनि साथ रहने बाचा गथ्र्योँ । त्यसै त्यसै हौसिन्थेँ म, मानौँ अर्को जुनि पनि यही हो ।
मेरो जीवनमा अर्को उभौली थपियो । त्यो उभौलीसँगै मनिसरा पनि सात कक्षा पास गरी दाङ घोराही पढ्न जाने भई । स्कूलमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्कूल छाडेर सन्तु पनि घोराही झर्यो । जानुभन्दा अघिल्लो साँझ मेरो गोठ आयो ऊ । भविष्यको मीठो आश्वासन मायावी लयले बेरेर हातमा थमाइदिएथ्यो– “राम्रो पढ्छु…. ब्रिटिशे लाहुरे हुन्छु ।” स्वर्णिम कल्पनामा म आफूलाई लाहुरेनीमा दर्ज गरेकी हुन्थेँ ।
“घोराहीको कुनै अस्पतालमा थिएँ । घाँसको भारीसँगै लडेर हात भाँचिएको थियो मेरो… सन्तु पनि थियो त्यहाँ । तर ऊ एक्लै थिएन । स्कूल पढ्दै गरेकी कुनै शिक्षित केटी थिई ऊसँग । मान्छेहरु भन्दैथिए– ‘हिजो मात्रै टीकाटालो भाको… ।’ मुटु कुँडलिएर आयो, असारे झरी खस्यो आँखामा…. ।”– झल्याँस्स ब्युँझिएँ । उफ ! के सपना देखेकी थिएँ ।
“कोसित हुनु नि ? सन्तु भेनासित रे… खुबै पढ्ने कहलिएर गाकी, पोई पो खोज्न गा‘रैछे । …. कहीँ नभाको बैँश ।”
आक्रोश र पीडाले आँखा देख्न छाडेँ । कुनै दिन निकै सुन्दर लाग्ने उसको रुप कुरुप देख्न थालेँ । असहजता बढ्न थाल्यो, उहिलेको सपना ऐँठन जसरी । ऊमाथि मैले झम्टिएँ त ? घृणाले चिथोरेँ त ? मेरा अढाई वर्षको प्रेमको ब्याज मागेँ त ? उसले दिएको एक एक बचनको सत्यता खोजेँ त ? अहँ, केही पनि मागिन । एक शब्द पनि बोल्न सकिन । मात्र आँखाबाट अढाई वर्षीय प्रेमको जिन्दगी झरिरह्यो । मुटु हुँडलिरह्यो । छातीमा भूईँचालो गइरह्यो । मुखबाट रुवाईको हिक्का छुटिरह्यो । झुकेका परेली साहसपूर्वक उठाएर उसले भन्यो– “मलाई जीवनभरि पापी र धोकेवाज सम्झिरहे है बनिसरा ।” न यसको प्रतिवाद गरेँ । न त उसको भनाईसित कुनै आग्रह र गुनासो नै । फेरि पनि “हिक्क… हिक्क” को जवाफ फर्काएँ ।
सन्तु र मेरो गहिरो प्रेम सम्बन्धबारे के मनिसरालाई थाहा थिएन त ? थियो । डाँफेछेडाको गाईगोठमा हामी सँगै बसेको बारेमा ऊ अनभिज्ञ थिई त ? निश्चितै होइन । तब फेरि किन मेरो खुशी देख्न चाहिन त मनिसराले ? यसको जवाफ मसित छैन । उसले नानाथरिका कुरा गरेकी भनेर कसैले मलाई सुनाएथे– “दिदी बनिसराले मलाई नपढाएर भेना सन्तेसित बिहे गरी भने बालको खाल उखेलीदिन्छु…. स्कूल पढ्ने केटासित ग्वाला बस्ने केटीको जोडी सुहान्न ।”
बिहेको छ महिनापछि जाँड धोकिरहेका समूहबीच सन्तुको तीखो आवाज सुनेर मेरो शरीरमा एकैचाटी हजार सुइयोले घोँचेजस्तै भयो । नशाको सुरमा ऊ भन्दै थियो– “अरे यार केटीको भरै हुन्न… डाँफेछेडाको गोठमा बनिसरासित कुन चाइने केटो मस्तसँग सुतेको भेटेँ, त्यसपछि छोडिदिएँ ।” गफको लामो अन्तरालपछि कुनै जवानलाई सुझाउँदै थियो– “मैले जस्तै दिदीलाई छाडेर बैनीलाई भगाइदे न यार, हा हा हा … ।”
“बनिसरा दिदी जोसित पनि बस्थी, त्यै भएर तिम्रो भेनाले छाडिदिए । त्यस्तै होला तिम्रो पनि, सबैसित मन नबाँड्नु… ।”
नेता झलनाथ खनाल अस्पताल भर्ना
नेकपा (एमाले)का नेता झलनाथ खनाल थापाथलिस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । नियमित उपचारका